Javier Alonso García-Pozuelo, La cajita de snuff का लेखकसँग कुरा गर्दै | वर्तमान साहित्य
Javier Alonso García-Pozuelo, La cajita de snuff का लेखकसँग कुरा गर्दै
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | साक्षात्कार, लेखकहरू, नोभेला, कालो उपन्यास
आज म बोल्छु जेभियर एलोन्सो गार्सिया-पोजुएलो, म्याड्रिड लेखक जससँग म ला Mancha बाट जरा साझा गर्छु। उनको पहिलो उपन्यास, स्नफ बक्सपछिल्लो वर्ष प्रकाशित, केहि समयको लागि यहाँ र विदेशमा सफल भएको छ। मैले यो समयमा पढेको थिएँ र मलाई मिश्रण पनि मन पर्यो ऐतिहासिक उपन्यास धेरै राम्रो दस्तावेजीकरण र १ XNUMX औं शताब्दीमा म्याड्रिड र यसको सेट पुलिसको योजना उसलाई अभिनीत गर्दै इन्स्पेक्टर जोसे मारिया बेनिटेज, एक प्रकारको शर्लक होम्स वा परम्परागत विडोक। पेशा अनुसार एक डाक्टर, गार्सिया - पोजुएलो कृपया मलाई केहि प्रश्नहरु उत्तर दिन्छन् र यहाँ बाट धन्यवाद.
1 जोभियर एलोन्सो गार्सिया-पोजुएलो को हो?
2.1 तपाईलाई साहित्यको मतलब के हो? यसले तपाइँलाई के दिन्छ र तपाइँ किन यत्तिको आवश्यक लाग्नुहुन्छ?
2.2 तपाईंले मेडिसिन अध्ययन गर्नुभयो, तपाईंले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा समर्पित गर्नुभयो। कहिलेदेखि साहित्य छ?
2.3 एक पलको लागि तपाईंको बचपनमा जाऔं। के तपाईं जरा पठनबाट आउनुभयो? तपाईले पढ्नको लागि के प्रयोग गर्नुभयो? तपाईंले तीन बुद्धिमती पुरुषलाई के सोध्नुभयो?
2.4 जो अहिले सम्म यो पढेका छैनन्, तपाइँ कसरी स्नफ बक्सलाई विचार गर्नुहुन्छ? एक जासूसी प्लॉट सहित एक ऐतिहासिक उपन्यास वा एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संग एक जासूस उपन्यास?
2.5 र तपाईंलाई के लाग्छ उनीहरूसँग जुन हामी यति धेरै उपन्यासहरू मन पराउँदछौं जसमा क्यारिज्म्याटिक इन्स्पेक्टरले कुनै अपराध उजागर गर्नु पर्छ?
2.6 बेन्टेज त्यो असल र नम्र प्रहरी हुन् जो खराबीको बिरूद्ध लड्दछन्, मूल्यवान मानिसहरु। के यो ऐतिहासिक चरित्रमा आधारित छ जसले तपाईंलाई प्रेरित गरे? र तपाईं हामीलाई के बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ?
2.7 के त्यहाँ इन्स्पेक्टर बेनिटेजको साथ दोस्रो भाग वा गाथा हुन सक्छ?
2.8 र कुन लेखक वा पुस्तकहरू तपाईंको मनपर्नेहरूमा छन् वा तपाईं उनीहरूले आफ्नो क्यारियरलाई प्रभाव पार्न सक्षम छन् भनेर विचार गर्नुहुन्छ?
2.9 स्पेन र विश्वभरि जासूसी उपन्यासको विकासको बारेमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ? विधामा तपाइँका मनपर्ने लेखकहरू को हुन्?
2.10 यो पहिलो उपन्यासको सफलता संग, तपाइँ एक लेखकको रूपमा आफ्नो भविष्य कसरी विचार गर्नुहुन्छ?
2.11 र अन्तमा, यदि तपाइँ केवल तपाइँको जुनसुकैबाट एकसँग रहनुपर्दछ, यो के हुनेछ?
जोभियर एलोन्सो गार्सिया-पोजुएलो को हो?
चिकित्सक, शिक्षक र म्याड्रिडबाट लेखक, हो चिकित्सा र शल्य चिकित्सा मा स्नातक म्याड्रिडको स्वायत्त विश्वविद्यालय द्वारा, र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मा डिप्लोमा कम्पुलेन्स युनिभर्सिटी द्वारा। उनले दशक भन्दा बढी समयसम्म अभ्यास गरे बायोस्ट्याटिक्स र सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रोफेसर को रूपमा काम गर्नुको अलावा लेखक, प्रूफरीडर र वैज्ञानिक पाठको सम्पादक.
उहाँ हालको रूपमा आफ्नो स्थिति संयोजन गर्दछ ल्याटिन अमेरिकाको लागि शैक्षिक र सम्पादकीय निर्देशक चिकित्सा प्रशिक्षण स्कूलबाट आमिर आफ्नो साहित्यिक गतिविधि संग। केहि बर्षसम्म उसले निर्देशन र सम्पादन गर्यो ग्लोरिटामा नियुक्ति, एक सहयोगी ईतिहास र साहित्य ब्लग, र निर्देशित गर्दछ ग्लोरिटामा कालो हप्ता, साहित्यिक कालो र पुलिस विधामा समर्पित महोत्सव।
तपाईलाई साहित्यको मतलब के हो? यसले तपाइँलाई के दिन्छ र तपाइँ किन यत्तिको आवश्यक लाग्नुहुन्छ?
पठन मेरो जीवनमा मित्रता, प्रेम, राम्रो खाना पकाने वा संगीत जत्तिकै आवश्यक छ। मँ, जो म हुँ, ठूलो अंशमा, मैले पढेका कुराहरूको लागि धन्यवाद। किताबहरू मेरो दिनको एक अनिवार्य अंश हो। म किताबहरूसँग काम गर्दछु र मेरो खाली समयमा म उनीहरूसँग निरन्तरता दिन्छु। म धेरै मिलनसार छु र म साथीहरूसँग बाहिर पिउन र च्याट गर्न जान्छु (किताबहरूको बारेमा सधैं होइन, रेकर्डको लागि), तर मैले स्वीकार गर्नु पर्छ कि म पनि एक्लै हुँदा रमाईलो गरीरहेछु, टेबुलमा स्टीमिंग कफीको साथ र हात बीच एक राम्रो पुस्तक।
तपाईंले मेडिसिन अध्ययन गर्नुभयो, तपाईंले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा समर्पित गर्नुभयो। कहिलेदेखि साहित्य छ?
हुनै पर्छ पन्ध्र वा सोह्र वर्ष जब मैले पहिलो लेख लेखें जुन उपन्यास हुनुपर्ने थियो। अवश्य पनि, म पहिलो अध्यायमा पुगेको छैन। छोटो भन्दा अलि अगाडि वा चाँडै, मलाई याद छैन, मैले लेखें एउटा गीत जसको विषय, एक स्वार्थी, माचो र असंवेदनशील पतिको कारण दुखी गृहिणी उपन्यासको जस्तै थियो।
गीतमा एक जवान मानिस छ जो त्यस महिलालाई माया गर्छे। मैले यो क्यासेटमा रेकर्ड गरेको छु। मारीला यो भनिन्थ्यो। गीत, मेरो मतलब, यो महिला लेखेर जब मबाट प्रेरणा भएको होईन। के सम्झनाहरु! त्यसबेलादेखि मैले लेख्न छोडेको छैन। गीतहरू, कथाहरू, उपन्यासहरू र लेखहरू। केहि बर्ष पहिले परिवर्तन भयो कि यो हो कि म धेरै समय लेख्न को लागी खर्च गर्न थालें र मैले प्रकाशनको लक्ष्यका साथ गरे।
एक पलको लागि तपाईंको बचपनमा जाऔं। के तपाईं जरा पठनबाट आउनुभयो? तपाईले पढ्नको लागि के प्रयोग गर्नुभयो? तपाईंले तीन बुद्धिमती पुरुषलाई के सोध्नुभयो?
एक मजदुर वर्ग परिवार सोमबारदेखि शनिबारको एक चम्किलो बुबा र तीन बुहारी आमासहित एक आमाले हुर्काउन, तपाईंको आमाबाबुलाई पढ्नको लागि फुर्सत समय पाउन सजिलो छैन, यद्यपि घरमा। त्यहाँ सधैं धेरै किताबहरू थिए। मेरो वरिपरि पुस्तकहरू भए पनि, म एक धेरै प्रोकसर्भक पाठक थिएन र निस्सन्देह, मलाई कहिले पनि पुस्तकका लागि थ्री किंग्सलाई सोध्ने सम्झना छैन।
यद्यपि, बाल्यकालको पढाइले मलाई गहिरो चिह्न लगायो। म उनको बच्चाको कारण पढ्ने कारणले गर्दा के हो भनेर म वर्णन गर्न सक्दिन, तर सानो राजकुमारएन्टोइन डे सेन्ट-एक्सप्युरी द्वारायो पुस्तकहरू मध्ये एक हो जसले मेरो कल्पनामा सबैभन्दा ठूलो छाप छोडेको छ। जब मेरो जीवन आंकडा र वयस्कको चिन्ताको साथ संतृप्त हुन्छ, म फेरि यो पढ्छु।
जो अहिले सम्म यो पढेका छैनन्, के तपाईं विचार गर्नुहुन्छ स्नफ बक्स? एक जासूसी प्लॉट सहित एक ऐतिहासिक उपन्यास वा एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संग एक जासूस उपन्यास?
क्रियोमा तत्वहरू समावेश छन् दुबै विधाहरूयद्यपि, मेरो दृष्टिकोणबाट यो एक जासूस उपन्यासको योजनासँग मिल्दोजुल्दो छ ऐतिहासिक भन्दा बढी। जब यो लेख्ने क्रममा मैले नीर विधाका अधिवेशनहरू एकदमै सहजै लिएँ र ऐतिहासिक आयामलाई धेरै महत्त्व दिएँ, तर उपन्यासको अक्ष भनेको एउटा अपराधको संकल्प र यसको नायक हो, एक अन्वेषक हो।
मैले पिरियड सेटिंग र राजनीतिक प्रसंगसँग कडा र कागजातको रूपमा कडासँग काम गरे पुलिसका कार्यहरूको, त्यसैले, लेबलहरू अलग रहँदा, म यो सोच्न चाहन्छु कि न त ऐतिहासिक उपन्यास पाठकहरू न त जासूसी उपन्यास प्रशंसकहरूले यसलाई पढ्दा उनीहरूको अपेक्षाहरू निराश भएको देख्दछन्। आशा छ धेरै पाठकहरु म संग सहमत छन्।
र तपाईंलाई के लाग्छ उनीहरूसँग जुन हामी यति धेरै उपन्यासहरू मन पराउँदछौं जसमा क्यारिज्म्याटिक इन्स्पेक्टरले कुनै अपराध उजागर गर्नु पर्छ?
सबै साहित्यहरू, केवल पुलिस वा रहस्यमय साहित्यहरू मात्र होइन, हाम्रो ज्ञानलाई जान दिन्छन्। हामी जान्न उत्सुक व्यक्तिहरू हौं जुन जान्न सक्षम हुन चाहन्छु, जस्तै भालेज डे गुएवराको लालागी शैतान, जुन हाम्रा छिमेकीहरूको घरको छानामुनि हुन्छ। साहित्यले चरित्रको आत्मीयताहरू बताउँदछ जुनसँग हामीले पहिचान गर्न सक्दछौं वा कसलाई घृणा गर्न सकिन्छ, तर कसले केही कारणले हाम्रो चासो जगायो।
जासूसी उपन्यास पनि हामीलाई ती घनिष्ठता अनुमान मा खेल्न अनुमति दिन्छ अन्वेषकको रूपमा। र त्यो चरित्र क्यारिज्म्याटिक हुनुपर्दछ। त्यो आजको जासूस उपन्यास लेखकको ठूलो चुनौती हो: तपाईंको पाठकहरूलाई कालो विधाको इतिहासमा सयौं प्रतिभाशाली अन्वेषकहरूको अनुसन्धान पछि उनीहरूको अनुसन्धानमा तपाईंको साथमा भएको जस्तो महसुस गराउन।
अपराध उपन्यासमा नायकको करिश्मा कम्तिमा कथानकको रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ती दिनहरू जुन हामी उपन्यास पढिरहेका छौं हामी उसके छेउमा धेरै घण्टा बिताउँछौं। हाम्रोलागि हाम्रो समय उहाँ समर्पण गर्न हामी त्यो पुलिस अफिसर, जासूस, न्यायाधीश वा वकिलसँग केहि गर्न सक्छौं।
बेन्टेज त्यो असल र नम्र प्रहरी हुन् जो खराबीको बिरूद्ध लड्दछन्, मूल्यवान मानिसहरु। के यो ऐतिहासिक चरित्रमा आधारित छ जसले तपाईंलाई प्रेरित गरे? र तपाईं हामीलाई के बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ?
बेनेटेज यो कुनै ऐतिहासिक व्यक्तित्वबाट प्रेरित छैन विशेष रूपमा, तर उसको क्यारियर मार्ग त्योसँग मिल्दैन १ policemen1861१ देखि म्याड्रिडका केही प्रहरीहरूउपन्यास विकसित भएको छ। र धेरै कमजोरीहरूको बाबजुद पनि, उहाँसँग एउटा सद्गुण रहेको छ जुन म चरित्रको बारेमा सब भन्दा बढी हाइलाइट गर्दछु: निष्ठा.
म ती मानिसहरूलाई प्रशंसा गर्दछु जसले उनीहरूको नैतिक सिद्धान्तलाई पन्छाउँदैनन् को रूप मा परिस्थिति प्रतिकूल छ, उदाहरण को लागी, जब तपाइँको काम को खतरा मा छ। मलाई लाग्छ कि यो चरित्रको साथ मैले चाहेको कुरा के हो भने, त्यहाँ त्यस्तो व्यक्तिहरू छन् जुन आफ्नो उद्देश्य र उनीहरूको व्यक्तिगत सुरक्षालाई जोखिममा राख्छ भने पनि उचित उद्देश्यका लागि युद्ध गर्दछन्।
के त्यहाँ इन्स्पेक्टर बेनिटेजको साथ दोस्रो भाग वा गाथा हुन सक्छ?
मेरा धेरै पाठकहरू मलाई सोध्छन् र यो मेरो सम्पादकले सुझाव दिएका छन्, यद्यपि मसँग धेरै साहित्यिक परियोजनाहरू दिमागमा छन्, तर मलाई लाग्छ कि मैले तिनीहरूलाई क्षणको लागि अलग राख्नुपर्नेछ र अर्को उपन्यास प्राथमिकता इन्स्पेक्टर बेनिटेज।
र कुन लेखक वा पुस्तकहरू तपाईंको मनपर्नेहरूमा छन् वा तपाईं उनीहरूले आफ्नो क्यारियरलाई प्रभाव पार्न सक्षम छन् भनेर विचार गर्नुहुन्छ?
त्यहाँ धेरै लेखकहरू छन् जसले तपाईंको जीवनको मञ्चलाई आगोले चिह्न लगाउँछन्। दिमागमा आउनुहोस् स्टेंडल, दोस्तोएवस्की, बरोजा, कारमेन लाओफर्ट, भोज्केज मोन्टलबेन, कुन्देरा, फिलिप रोथ। मलाई लेखक छनौट गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। एक मात्र किताब छनौट गर्नुहोस्, असम्भव.
स्पेन र विश्वभरि जासूसी उपन्यासको विकासको बारेमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ? विधामा तपाइँका मनपर्ने लेखकहरू को हुन्?
मलाई लाग्छ कि जासूसी उपन्यास र ऐतिहासिक उपन्यासको वर्तमान सफलताको सरल व्याख्या छ: व्यक्तिहरू पढेर मनोरन्जन गर्न मनपराउँदछन् र यी दुई विधाहरूमा तत्काल चंचल घटक हुन्छ। उपन्यास उत्कृष्ट साहित्यिक गुणस्तरको साथ मनोरञ्जनमा कुनै फरक छैन। दिमागमा आउँछ एडुआर्डो मेन्डोजा, अन्तिम सर्भेन्ट्स पुरस्कार, यद्यपि त्यहाँ धेरै उदाहरणहरू छन्।
मनपर्ने लेखकहरूको बारेमा कुरा गर्न धेरै गाह्रो छ। म वर्तमान अपराध उपन्यासहरूका भव्य लेखकहरूको कुरा गर्न सक्दिन किनकि मैले जति नै उल्लेख गरेँ, यसले मेरो प्रशंसा गर्ने आधा भन्दा बढी छोडिदिन्छ। हो, म उल्लेख गर्न चाहान्छु, किनकि ती उही हुन् जुन भर्खरका वर्षहरूमा मैले सबैभन्दा बढी पढेका थिएँ, तीन लेखकहरू जसले पहिले नै मरेका छन्: Hammett, सिमेमन y Vazquez Montalban.
यो पहिलो उपन्यासको सफलता संग, तपाइँ एक लेखकको रूपमा आफ्नो भविष्य कसरी विचार गर्नुहुन्छ?
कम्तिमा स्पेनमा पनि साहित्यिक संसारमा ठोस जमिन भन्दा धेरै चुपचाप छन्. अपेक्षाहरू सेट गर्नु राम्रो छैन। जे सुन्ने छ। एक पलको लागि, मेरो लागि महत्वपूर्ण कुरा इन्स्पेक्टर बेनेटेजको दोस्रो केस पनि यो एक रूपमा प्राप्त भयो। मैले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पढ्ने क्लबहरूमा भाग लिएको छु र अन्य देशका मानिसहरु उपन्यास संग जोडिएको देख्दा एकदमै रमाइलो आश्चर्य भएको छ, कम्तिमा पनि सेटिंग्सको हिसाबले म्याड्रिलिनियन।
र अन्तमा, sयदि तपाइँ तपाइँको जुनसुकै एक मात्रसँग बस्नुपर्‍यो भने, के हुन्छ?
शब्द। कृपया मलाई उनीमा कार्सेट राख्न अनुरोध नगर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » Javier Alonso García-Pozuelo, La cajita de snuff का लेखकसँग कुरा गर्दै
फिलिप पुलम्यान द्वारा "डार्क मैटर"। एक त्रयी जुन सबै उमेरका बीचमा आनन्द लिन सकिन्छ।
एडगर एलन पो जीवनी र सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू